Jamaal Muhammad Ahmed | Guide to Islam, A Brief Guide to Understand Islam & Muslims
shekh Jamaal Muhammad Ahmed
Tolina amantii islaamaa
ffaa Utubaalee islaamaa
ffaa Utubaalee iimaanaa Jahan
ffaa Ibaadaa fii hiikkaa isii
ffaa Towhiidad fi qooda isaa
kitaabni kuni barnoota salaataa guutuu nama barsiisa.
Soomana ramadaanaa seera sadarkaa fii naamusa isaa
Xahaaraa fi salaata
Sagantaan kun waayee wuduu, tayamuuma, dhiqannaa qaamaa bal’inaan dubbata barnoota salaataatis guututti qaba.
Towhiid & utubaalee islaamaa fi iimaanaa
Sagantaan kun wayee tokkumaa rabbiiti nama barsiisa. Ammas utubaalee islaamaa fii iimaanaa uf keessaa qaba.
Barnoota xahaaraa qulqullinnaa
Sagantaan kun waayee barnoota qulqullinaa xahaaraa keessatti hubannoo guddaa namaaf kenna.
Haqa muslimtoonni walirraa qaban
Sagantaan kun waayee haqa muslimtoonni walirraa qaban jedhu keessatti barnoota gayaa ufkeessaa qaba.
Sagantaan kun waayee miidhaa shirkii jedhu keessatti barnoota gayaa uf keessaa qaba.
10n baatii zulhijjaah
sagantaan kun waayee 10n zulhijjaa kan duraarraa dubbata.
sagantaan kun barnootaafii seera iidaa nama hubachiisa.
seera qalma udhiyyaa
sagantaan kuni waan guyyaa iidaa qalan udhiyyaa seera isiirraa dubbata.
Waan Rabbi malee jiruun kakachuu
sagantaan kuni waan haraam tan namni laafise mata duree jedhuun qophaaye. diliilee hojjachuun dhoowwaa taahee namaa ibsa.irraa nama doowwas. kunii kutaa 2ffaadha.
Waan haraam ta namni laaffise - Rabbi malee waanbirootiif qaluu
Waan haraam ta namni laaffise Ibaadaa keessatti garsiifachuu
Namoota gaggaarii keessatti daangaa dabruu
Waan haraam ta namni laaffise Falafel godhu
or Farshoo dhuguu
sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.
or Raga dharaa bahuu
Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa - 4
Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -4
Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3
Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -3
Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -2
Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -2
Sadarkaa ji'a muharrami fii Soomana Aashuuraa -1
Sagantaa kana keessatti barnoota sadarkaa ji'a murramii fii soomanni guyyaa 9ffaa fii10ffaa ji'a kanaa qabu guddaa tahuutu ibsama.dogoggorri ji'a kana keessatti hojjatamus ibsamee jira.sagantichi kutaa 4 ufkeessaa qaba -1
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -01
Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -2
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -02
Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -3
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -03
Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -04
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -04
Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu - 5
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -05
Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -6
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -06
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -07​
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -07
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -08
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -08
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -09
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -09
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -10
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -10
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -11
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -11
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -12
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -12
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -13
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -13
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -14
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -14
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -15
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -15
​Waan diin Rabbiirratti gadi nama jajjabeessu -16
Sagantaa kana keessatti barnoota waan diin Rabbii (islaamummaa) irratti gadi nama jajjabeessutu dhihaata. fakkeenyaaf qur'aana qara'uu, imaanaa fii hojii toltuu, zikrii fii du'aa'ii kkf dha. sagantaan kun kutaa 27 ufjalaa qaba -16
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -01
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 01
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -02
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 02
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -03
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 03
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -04
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 04
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -05
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 05
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -06
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 06
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -07
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 07
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -08
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 08
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -09
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 09
barnoota seera jum'ah sadarkaafi namusoota isii -10
sagantaa kana keessatti barnoota waayee salaata jum'ah, sadarkaafii naamusa isiittu ibsama.kutaa 10 ufkeessaa qaba. 10
Sadarkaa ji’a Muharramiifii soomana Guyyaa Aashuuraa
sagantaa kana keessatti sadarkaa ji’a muharramiifii soomana aashuuraattu ibsama.
Seera zakaa fixrii
Barruu kana keessatti seera zakaa fixrii yeroo fii akkaataa isiitu balinaan ibsame.
Sagantaa kana keessatti namusootaa salaamtaa, teessumaa, nyaataafii dhugaatii, hirriibaa, kadhaa Rabbii fii karaa deemsaa bal’inaan dhihaatee jira.
Barruun kun naamusa kadhaa Rabbii tii fi waan duaaiin walqabatu qajeellotti nama barsiisa.
Barruun kun naamusa karaa deemsaaf barbaachisu qajeellotti nama barsiisa.
Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 1
Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 1
Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 2
Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 2
Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 3
Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 3
mallattoo laafina iimaanaa 1
sagantaan kuni mallattoowwan laafina iimaanaa tan akka ibaadaa hifachuu fii dilii jaalachuu fi kkf ibsa.
mallattoo laafina iimaanaa 2
mallattoo laafina iimaanaa 3
mallattoo laafina iimaanaa 4
mallattoo laafina iimaanaa 5
mallattoo laafina iimaanaa 6
mallattoo laafina iimaanaa 7
mallattoo laafina iimaanaa 8
Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 01
Sagantaa kana keessattii haqa abbaan manaatiifii haati manaa walirraa qabantu bal'inaan dhihaata.
Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 02
Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 03
Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 04
Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 05
Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 06
Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 07
Haqa jaarsaaf jaartii islaama keessatti 08
Soomanni akkaa hiikkaa afaaniitti ufqabuudha. Fakkenyaaf Rabbiin s.w. akkana jedhe ''innii nazartu lirrahmaani sowman '' hiikkaan " ani ufqabuu rahmaaniif qodhaa godhee jira" jechuudha.
Maalummaa Soomana Ramadaanaa
Soomanni baatii ramadaanaa, utubaa tokko kan utubaalee islaamaa irraa taheedha, dhirqama islaamaa kan quraanaa, hadiisaa fii ijmaa'aan mirkanaayee jiru.
Soomanni Ramadaanaa yoom fardii godhame?
Soomanni ramadaanaa waggaa lammeysaa hijraati fardii godhame, Nabiin s.a.w. ramadaana sagal soomane.
Mee Ramadaana maaliin simanna?
Soomana Ramadaanaa wanni simannuun kunoo kanneen kana.
Qajeelfama nabii s.a.w. Ramadaana kessa.
Aaadaan nabiikeenyaa s.a.w. ramadaana keessaa ibaadaa Rabbii gosa adda addaa irraa guddisuudha.Jibriil halkan Ramadaanaa hundaawu nabitti dhufeeti qura'ana wajji qara'an,Nabiin yogguu jibriil itti dhufe qilleensa bubbisurra keyritti daddafa.
Waan nama soomanaa irraa barbaachisu
Namni soomanaa ibaadaa Rabbii heddummeessuu barbaachisa, haraam hundarraa fagaachuu qaba, salaata shanan yeroo isiitti jamaa'aadhaan salaatuu qaba, kijiba dhiisuu qaba, nama hamachuu, nama gowwoomsuu, dhala (Ribaa) nyaachuu, fii jechootaa fii hojiilee dhoowwa tahe hundarraa fagaachuu barbaachisa.
Waan nama soomanu ibaadarratti gargaaru
Sodaa Rabbii Qabaachuu fi hamtuu hundarraa uf eeguu
Guddina sadarkaa ramadaanaa
inni ji'a qur'aanni isakeessatti buufame tahuu, kun waan jiini kun ittii sadarkaa guddaa argate keessaa kan hangafaati.
Sadarkaa soomana akka waliigalaatti
galanni soomanaa lakkoofsaan malettii heddummaatee galfama.
Faaydaa fi hikmaa soomanaa
Jaalala Rabbii barbaachaaf waan lubbuun feetu dhiisuu.akka kanaan galata isaa argatanii, jannata isaa badhaafaman
Ulaagaalee soomanni itti dirqama tahu
Ulaagaalee soomanni itti dirqama tahu.
Soomana furiinsa jarjarsuu,yogguu aduun seenuu mirkaneyfatan.Nabiin s.a.w. akkana jedhan ''namni toltumarra jira waan soomana furaa jarjarseen''bukhaarii fi muslim.
saalaa godhuu guyyaa soomanaa, kun soomana balleessaa,garuu guyyaa isaa kanhafee soomana itti fufuu qabaa,guyyaa kana qadaa kafaluu qaba,adaba kaffaaraa guddotu isarraa barbaachisaa,-isiinis gabra tokko bilisoomsuudha,yoo hinargatin ji'a lama walitti dhaabee soomanuudha,yoo hindandayin miskiina jahaatama.
Towhiidad fi qooda isaa
Barnoota 5ffaa Towhiidad fi qooda isaa.
Tooftaa jiruu gammachuu -01
kitaaba kana keessatti tooftalee namni yoo isitti fayyadamee jiruu gaariifii tasgabbooytu jiraatuutu ibsame.tan hiraariifii gadadoo namarraa fageysitu -01.
Tooftaa jiruu gammachuu -02
kitaaba kana keessatti tooftalee namni yoo isitti fayyadamee jiruu gaariifii tasgabbooytu jiraatuutu ibsame.tan hiraariifii gadadoo namarraa fageysitu -02
Tooftaa jiruu gammachuu -03
kitaaba kana keessatti tooftalee namni yoo isitti fayyadamee jiruu gaariifii tasgabbooytu jiraatuutu ibsame.tan hiraariifii gadadoo namarraa fageysitu -03
Firummaa mururraa dhoowwuu
Sagantaan kun waayee hammeenyaa fii balaa firummaa muruun qabdu ibsa.
Soomana Ramadaana Heera, Sadarkaafii, Naamusa Isaa
Sagantaan kun akkaataa soomana ramadaanaa sirritti nama hubachiisa.
Sadarkaa ji’a muharrami fii Soomana Aashuuraa -3
badirraa qaanfachuun iimaanarraayi
sagantaa kana keessatti hojiiwwaniifii jechoota galata gurguddaa qabantu ibsama.tan akka zikrii du'aaiifii sabrii fi kkf.
Dhugumaan shahiidummaa wareegama Rabbi kadhachuu
nama rakkoo hojii manaa Rabbiin irraa laaffisuu fedhe